भखरै डीसहोममाथि विप्लव माओवादीद्वारा आक्रमण::RATONEWS
भखरै डीसहोममाथि विप्लव माओवादीद्वारा आक्रमण
ललितपुरको भैसेपाटीमा रहेको डिसहोमको मुख्य कार्यालयमा अाज बुधबार बिहानै नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेका छन् । माओवादी कार्यकर्ताहरु गएर डिसहोममा आगजनी समेत गरेका छन् । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरुले उक्त आक्रमण गरेको दावी गरेका छन् । नेपालमाथि भारतले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीको विरोधस्वरुप भारतीय च्यानल बन्द गर्न गरिएको आग्रहलाई ठाडै इन्कार गरेको भन्दै माओवादीले डिसहोममाथि आक्रमण गरेको बताएको छ ।
आक्रमणबाट डिस होमको मुख्य टावरमा क्षति पुगेको छ । बुधबार बिहानै ६ बजेतिर माओवादी कार्यकर्तारुले टावरमा आक्रमण गरेका थिए । टावरका साथै डिसहोमको कार्यालयमा पनि आगजनी गरिएको डिसहोमका एक कर्मचारीले जनाएका छन् । आक्रमणपछि डिसको प्रशारण बन्द भएको छ । नेकपा माओवादीको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा जनस्वयमसेवकका केन्द्रीय सचिव केशवले डिसहोमले नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको बताए । उनले आफूहरुले डिसहोम सञ्चालकलाई पटक पटक भारतीय च्यानल बन्द गर्न आग्रह गरेको तर उल्टै आफूहरु विरुद्ध र भारतीय च्यानल बन्द गर्ने अरु केवल सञ्चालकका विरुद्ध षडयन्त्र गरेको बताए । डिसहोम सञ्चालकरुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई उचालेर भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नेहरुलाई कारवाही गर्ने धम्की दिन लगाएको पनि सचिव केशवले दावी गरे । त्यतिबेला डा. रिजालले दिएको अभिव्यक्ति उनको नभई डिसहोमको भएको दावी उनको छ । भारतले नेपालमाथि अमानवीय अघाेषित नाकाबन्दी लगाए लगत्तै भारतीय च्यानलमाथि प्रतिबन्द लगाउन सरकारसँग माग गरेकाे थियाे । साथै केवल र डिसहाेम सन्चालकहरुलार्इ पनि भारतीय च्यानल बन्द गर्न अाग्रह गरेकाे थियाे । साेही अाग्रह वमाेजिम केवल सञ्चालकहरुले भारतीय च्यानल बन्द गरेर नाकाबन्दीकाे विराेध जनाएका थिए । केवल सञ्चालकहरुले भारतीय च्यानल बन्द गरेकाे केही समयपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले च्यानल बन्द गर्ने केवल सञ्चालकहरुलार्इ स्पष्टिकरण साेध्दै उनीहरुमाथि कारवाही गर्ने धम्की समेत दिएका थिए । भारतीय च्यानलहरुले नेपालमा गएकाे महाविनाशकारी भुकम्प र नाकाबन्दीपछिकाे परिस्थितिलार्इ अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गरिरहेका थिए । ननस्टपबाट